Ahoana ny fomba fampifanarahana mora foana ny kalandrie iCloud sy Google | Vaovao IPhone
louis padilla | | iCloud, Fampianarana sy torolàlana
Na eo aza ny zava-misy fa maro amintsika no manana ny fitaovantsika rehetra ao anatin'ny tontolo iainana Apple, ny omnipresence an'ny Google isaky ny serivisy amin'ny Internet dia midika fa amin'ny fotoana maro dia tsy maintsy mampiasa ny iray amin'izy ireo ianao. Ny iray amin'ireo fanontaniana napetraka matetika dia ny fomba fampifanarahana ny kalandrie iCloud sy Google Calendar mandeha ho azy, ary izany no holazainay aminao anio.
Safidy mety indrindra amin'ny fotoana maro, ohatra, raha manana smartphone na tablette Android isika, na raha miasa isika dia "terena" hampiasa Google Calendar. Tsy mila mandany ora na vola mitady rindranasa mamela antsika hanao io asa io, satria ny serivisy zanatany mihitsy no mamela antsika hanao azy ho azy sy maimaim-poana, ary izany no holazainay aminao eto ambany amin'ny antsipiriany.
1 Andininy roa lehibe tsy maintsy adino
2 1. Mizarà avy amin'ny iCloud
3 2. Ampidiro amin'ny Kalandrie Google
Andininy roa lehibe tsy maintsy adino
Raha te hampifanaraka ireo kalandrie ireo dia tsy maintsy manaiky ny tsy fahatomombanana kely roa isika. Ny voalohany dia izay tsy maintsy hizara ampahibemaso ny kalandrie iCloud isika Tianay ny mampifandray, izay mety ho fihemorana lehibe amin'ny tranga sasany (fa tsy ahy). Midika izany fa izay manana izany rohy izany dia afaka miditra amin'ny kalandrie, saingy tsy mora ny mahazo ilay rohy.
Ny lesoka faharoa dia ny fampitahana azy amin'ny fomba iray ihany, manomboka amin'ny iCloud ka hatrany amin'ny Google, izany hoe avy amin'ny Google Calendar dia tsy afaka manova na inona na inona amin'ireo kalandrie ireo ianao. Mihoatra noho ny fanelingelenana fotsiny, tombony ho ahy io, fa raha tsy izany no ilanao an'ity tranga ity dia tsy mety aminao io safidy atolotray anao eto io.
1. Mizarà avy amin'ny iCloud
Ny dingana voalohany dia ny fizarana ny tetiandro avy amin'ny kaonty iCloud anao. Ho an'izany avy amin'ny solosaina fitetezana miditra amin'ny iCloud.com isika ary avy ao anaty ny kalandrie safidy dia tsindrio ny kisary amin'ireo onja efatra (toy ny sary famantarana WiFi) hamoahana ireo safidy fifampizarana. Tsy maintsy ampiasaintsika ny safidin'ny Kalandrie ho an'ny daholobe ary alaintsika ny rohy izay miseho eo ambaniny.
2. Ampidiro amin'ny Kalandrie Google
Ankehitriny dia tsy maintsy miditra amin'ny kalandrie Google avy amin'ny mpitety tranonkala isika, ary ao anatin'ny efijery lehibe dia ampio kalandrie avy amin'ny URL, araka ny aseho amin'ny pikantsary.
Ao anatin'ny saha mifanandrify aminay dia apetakay ny adiresy URL izay nalainay taloha, saingy misy zavatra tsy maintsy atao alohan'ny hanampiana azy amin'ny Google. Tsy maintsy ovaintsika ho "http" ny tapany voalohany amin'ny kalandrie "webcal" araka ny hita eo amin'ny pikantsary. Raha vantany vao vita io dia afaka manindry ny "Add Calendar" isika mba hiseho ao amin'ny Google Calendar.
Ity hetsika ity azontsika atao ny mamerina azy io imbetsaka araka izay ilaintsika amin'ny alimanaka iCloud bebe kokoa. Ao anatin'ny safidin'ny kalandrie tsirairay amin'ny kalandrie Google dia afaka manova ny anarana, ny loko sns isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba fampifanarahana mora foana ny kalandrie iCloud sy Google
Salama, efa narahiko ireo dingana ary amin'ny kinovan'ny PC amin'ny kalandrie ireo fanovana ataoko amin'ny finday dia tsy havaozina. Raha marina fa mitondra amiko ny zava-mitranga amin'ny finday, saingy rehefa noforonina ny kalandrie dia tsy mandeha ny iphone => pc fanavaozana, fa raha ny mifanohitra amin'izay kosa dia ny PC mankany amin'ny finday (tokoa, izy io dia eo noho eo)
Inona no mety tsy hahomby ???
Salama Luis, misaotra tamin'ny lahatsoratra. Raha vantany vao ampifanarahiko amin'ny solo-sainako ny kalandrie iCloud zaraiko dia tsy afaka mahita hatrany ny fanavaozana io kalandrie io aho. Toy ny hoe namboarina niaraka tamin'io fotoana io ny zava-nitranga ary avy eo tsy misy fampifanarahana intsony. Misy sosokevitra ve?
Tsy haiko ... zahao ireo dingana satria manavao ahy io
Borja dia hoy izy:
Tahaka an'i Andres aho, ary nanao azy toy ny in' arivo. Izay napetrako tamin'ny iPhone dia tsy hita intsony ao amin'ny kalandrie google
Valiny tamin'i Borja
Jerry dia hoy izy:
Mitovy tanteraka izany.
Valiny tamin'i Jerry
Misaotra betsaka!!! rehefa avy nikaroka betsaka tamin'ny torohevitrao aho dia vitako vetivety .... miarahaba
Mamaly an'i isabel
ny din dia hoy izy:
Imbetsaka aho no nanao an'io ary ny fisehoan-javatra noforoniko tao amin'ny kalandrie iCloud dia tsy hita ao amin'ny kalandrie Google. Mety nisy niova ve?
Valio i eldin
Ando dia hoy izy:
Mitovy tanteraka amiko izany. Ataoko ireo dingana ireo (nanandrana tamin'ny finday isan-karazany aho) ary ny fisehoan-javatra noforonina hatrizay dia miseho fa tsy miseho intsony ireo vaovao, ary tsy mampitandrina ahy koa izy ireo, ary tsy nifanaraka foana. Io dia toy ny hoe ny vaovao efa misy fa ilay vaovao kosa tsy manavao azy. Misy mahalala fomba hafa ve? Mandà tsy mila mividy iPhone fotsiny aho amin'ity hadisoana kalandrie ity, wow. Fa ilaiko amin'ny olan'ny asa !!
Mamaly an'i Rocío
Inigo Iturmendi dia hoy izy:
Fahombiazana inona! Misaotra, Luis.
Valio amin'i Íñigo Iturmendi
Ricardo Galache dia hoy izy:
Tsara. Tsy nahita ny fampahalalana tamina rohy hafa aho.
Valiny tamin'i Ricardo Galache
Lahatsoratra tena tsara. Misaotra betsaka anao nandray anjara.
Valio amin'i Álvaro
Misaotra! Mahasoa, mazava ary fohy.
Amp dia hoy izy:
Salama, nampifanarahiko tamin'ny kalandrie ireo, fa rehefa mampahatsiahy fampahatsiahivana vaovao amin'ny kalandrie iCloud aho dia tsy havaozina amin'ny kalandrie gmal.
Valiny amin'i Amfi
Nataoko ny fampifanarahana ka amin'ny Google Kalandrie dia hita ny zava-mitranga amin'ny kalandrie Apple. Hifandrindra ho azy ve izy ireo amin'ny ho avy sa tsy maintsy ataoko isaky ny misy hetsika vaovao noforonina tao amin'ny kalandrie google?
Ny fifandraisana hafa (TOC), safidy iray amin'ny fandaharam-potoana misy anao manokana
Tile Sport, famakafakana an'ity tracker tena mahatohitra sy kanto ity